23 Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 2 “Taura nevanakomana vaIsraeri, uti kwavari, ‘Mitambo yaJehovha yomwaka nomwaka+ yamunofanira kuzivisa,+ kuungana kutsvene. Iyi ndiyo mitambo yangu yomwaka nomwaka: 3 “‘Basa ngariitwe kwemazuva matanhatu, asi zuva rechinomwe isabata rokuzorora zvakakwana,+ iko kuungana kutsvene. Musaita chero basa ripi zvaro. Isabata rinoitirwa Jehovha munzvimbo dzose dzamunogara.+ 4 “‘Iyi ndiyo mitambo yaJehovha yomwaka nomwaka,+ iko kuungana kutsvene,+ kwamunofanira kuzivisa panguva yako yakatarwa:+ 5 Mumwedzi wokutanga, pazuva rechigumi nemana romwedzi wacho,+ panguva yorubvunzavaeni ipaseka+ inoitirwa Jehovha. 6 “‘Pazuva rechigumi nemashanu romwedzi uyu ndipo pane mutambo wemakeke asina kuviriswa unoitirwa Jehovha.+ Munofanira kudya makeke asina kuviriswa kwemazuva manomwe.+ 7 Muchava nokuungana kutsvene pazuva rokutanga.+ Musaita chero basa ripi zvaro rakaoma. 8 Asi muuye nechinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto kwemazuva manomwe. Pazuva rechinomwe pachava nokuungana kutsvene. Musaita chero basa ripi zvaro rakaoma.’” 9 Zvino Jehovha akaramba achitaura naMosesi, achiti: 10 “Taura nevanakomana vaIsraeri, uti kwavari, ‘Kana mazosvika munyika yandichakupai, uye makohwa goho rayo, muuyewo nechisote chezvibereko zvokutanga+ zvegoho renyu kumupristi. 11 Iye ngaazunguzire+ chisote chacho pamberi paJehovha kuti mufarirwe. Mupristi ngaachizunguzire pazuva chairo rinotevera sabata. 12 Zvino pazuva ramuchaita kuti chisote chizunguzirwe, ipai gondohwe duku rakanaka, rine gore rimwe chete, kuti rive chinopiwa chinopisirwa Jehovha; 13 uye zvegumi zviviri zveefa yefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta, kuti zvive chinopiwa chacho chezviyo, chive chinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto, kunhuhwirira kwakanaka; uye chikamu chimwe chete pazvikamu zvina zvewaini kuti chive chinopiwa chacho chinonwiwa. 14 Musadya chingwa kana zviyo zvakakangwa kana zviyo zvitsva kusvikira pazuva iri,+ kusvikira mauya nechinopiwa chaMwari wenyu. Uyu murau nokusingagumi kuzvizvarwa zvenyu zvose munzvimbo dzose dzamunogara. 15 “‘Munofanira kuverenga kubvira pazuva rinotevera sabata, kubvira pazuva ramunouya nechisote chechinopiwa chinozunguzirwa, masabata manomwe.+ Iwo ngaave akakwana. 16 Munofanira kuverenga mazuva makumi mashanu,+ kusvikira pazuva rinotevera sabata rechinomwe, uye muuye nechinopiwa chezviyo+ zvitsva kuna Jehovha. 17 Munofanira kuuya nezvingwa zviviri+ kubva kunzvimbo dzenyu dzamunogara, kuti zvive chinopiwa chinozunguzirwa. Zvinofanira kuva zvefurawa yakatsetseka inokwana zvegumi zviviri zveefa. Ngazvibikwe zviine mbiriso,+ sezvibereko zvakatanga kuibva zvinopiwa Jehovha.+ 18 Munofanira kuuya nemakwayana makono akanaka manomwe,+ pamwe chete nezvingwa zvacho, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, nenzombe duku imwe chete nemakondohwe maviri. Zvinofanira kuva chinopiwa chinopisirwa Jehovha pamwe chete nechinopiwa chezviyo chazvo nezvinopiwa zvazvo zvinonwiwa kuti zvive chinopiwa chinopiswa nomoto, chokunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha. 19 Mupe mbudzana+ imwe kuti ive chinopiwa chechivi nemakwayana makono maviri, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, kuti ave chibayiro chokugoverana.+ 20 Mupristi ngaazvizunguzire+ pamwe chete nezvingwa zvezvibereko zvakatanga kuibva, kuti zvive chinopiwa chinozunguzirwa pamberi paJehovha, pamwe chete nemakwayana makono maviri. Zvinofanira kuva chinhu chitsvene kuna Jehovha nokuda kwomupristi.+ 21 Muzivise+ pazuva irori; kuti kuchava nokuungana kutsvene. Musaita chero basa ripi zvaro rakaoma. Uyu murau nokusingagumi munzvimbo dzenyu dzose dzamunogara kuzvizvarwa zvenyu zvose. 22 “‘Zvino pamunokohwa goho renyika yenyu, usakohwa uchipedzeredza kumucheto kwomunda wako paunenge uchikohwa, uye usanhonga zvinosaririra zvegoho rako.+ Uzvisiyire anotambudzika+ nomutorwa.+ Ndini Jehovha Mwari wenyu.’” 23 Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 24 “Taura nevanakomana vaIsraeri, uchiti, ‘Mumwedzi wechinomwe,+ nomusi wokutanga womwedzi wacho, panofanira kuva nokuzorora kwakakwana nokuda kwenyu, chiyeuchidzo chinoitwa nokurira kwebhosvo,+ iko kuungana kutsvene.+ 25 Musaita chero basa ripi zvaro rakaoma, uye muuye nechinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto.’” 26 Jehovha akataurazve naMosesi, achiti: 27 “Asi musi wechigumi womwedzi uyu wechinomwe izuva rokuyananisira.+ Munofanira kuva nokuungana kutsvene, mutambudze mweya yenyu+ uye muuye nechinopiwa+ chinopisirwa Jehovha nomoto. 28 Musaita chero basa ripi zvaro pazuva iri, nokuti izuva rokuyananisira kuti muyananisirwe+ pamberi paJehovha Mwari wenyu; 29 nokuti mweya yose isingazotambudzwi pazuva irori ichaparadzwa pakati pevanhu vayo.+ 30 Mweya upi noupi uchaita chero basa ripi zvaro pazuva irori, ndichaparadza mweya iwoyo pakati pevanhu vawo.+ 31 Musaita chero basa ripi zvaro.+ Uyu murau nokusingagumi kuzvizvarwa zvenyu zvose munzvimbo dzose dzamunogara. 32 Isabata rokuzorora zvakakwana nokuda kwenyu,+ uye munofanira kutambudza+ mweya yenyu musi wechipfumbamwe womwedzi wacho manheru. Muchengete sabata renyu kubvira manheru kusvikira manheru.” 33 Jehovha akaramba achitaura naMosesi, achiti: 34 “Taura nevanakomana vaIsraeri, uchiti, ‘Pazuva rechigumi nemashanu romwedzi uyu wechinomwe pachava nomutambo wematumba wemazuva manomwe unoitirwa Jehovha.+ 35 Pazuva rokutanga pachava nokuungana kutsvene. Musaita chero basa ripi zvaro rakaoma. 36 Muuye nechinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto kwemazuva manomwe. Pazuva rechisere muchava nokuungana kutsvene,+ uye muuye nechinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto. Iwo mutambo mukuru. Musaita chero basa ripi zvaro rakaoma. 37 “‘Iyi ndiyo mitambo yaJehovha yomwaka nomwaka+ yamuchazivisa sokuungana kutsvene,+ yokuti muuye nechinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto:+ chinopiwa chinopiswa+ nechinopiwa chezviyo+ chechibayiro, nezvinopiwa zvinonwiwa+ maererano nezvakarongwa zvezuva nezuva, 38 tisingabatanidzi masabata aJehovha,+ tisingabatanidzi zvipo zvenyu,+ tisingabatanidzi zvinopiwa zvenyu zvose zvemhiko+ uye tisingabatanidzi zvinopiwa zvenyu zvose zvokuzvidira,+ zvamuchapa Jehovha. 39 Asi pazuva rechigumi nemashanu romwedzi wechinomwe, pamunenge maunganidza zvibereko zvenyika, munofanira kuchengeta mutambo+ waJehovha kwemazuva manomwe.+ Zuva rokutanga richava rokuzorora zvakakwana uye zuva rechisere richava rokuzorora zvakakwana.+ 40 Pazuva rokutanga mutore michero yemiti yakanaka kwazvo, mashizha emichindwe+ nematavi emiti ine mapazi mazhinji nemishambangwena yomumupata une rukova, mufare+ pamberi paJehovha Mwari wenyu kwemazuva manomwe. 41 Muuchengete somutambo unoitirwa Jehovha kwemazuva manomwe pagore.+ Muuchengete mumwedzi wechinomwe somurau nokusingagumi muzvizvarwa zvenyu zvose. 42 Munofanira kugara mumatumba kwemazuva manomwe.+ Vanhu vose vomunyika yacho vari pakati paIsraeri vanofanira kugara mumatumba acho,+ 43 kuti zvizvarwa zvenyu zvizive+ kuti ndakagarisa vanakomana vaIsraeri mumatumba pandakanga ndichivabudisa munyika yeIjipiti.+ Ndini Jehovha Mwari wenyu.’” 44 Naizvozvo Mosesi akataura nezvemitambo yaJehovha yomwaka nomwaka+ kuvanakomana vaIsraeri.